आफैले चलाएकाे कार दुर्घटनामा पर्नुभएकाे थियो कलाकार तथा पत्रकार पाण्डे! – PathivaraOnline
Home > समाचार > आफैले चलाएकाे कार दुर्घटनामा पर्नुभएकाे थियो कलाकार तथा पत्रकार पाण्डे!
admin June 28, 2020 समाचार	0
सवारी दुर्घटनामा परी रुपन्देहीमा गए राति एक पत्रकारको निधन भएको छ । दुर्घटनामा परेर निधन हुनुभएका पत्रकार कृष्णबाबु पाण्डे एक कुशाल कलाकार पनि हुनुहुन्थ्यो । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं ६ ड्राइभरटोल निवासी ३० वर्षीय कृष्णबाबु पाण्डेको आफैँले चलाएको कार दुर्घटनामा निधन भएको ५ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्लीनारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रिति आलेकाे लरिबरिलै हेर्नुसः